အခွန်တိုးလို့ အိမ်ခြံမြေဈေး ကျမလား | ဧရာဝတီ
အခွန်တိုးလို့ အိမ်ခြံမြေဈေး ကျမလား
အောင်သက်ဝိုင်း| August 15, 2012 | Hits:8,557
6 | | မြင့်တက်လျက်ရှိသော အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများကို ဝယ်ယူခွန်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လျှော့ချနိုင်မည်ဟု အစိုးရက ထင်မြင်နေ (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူသူက အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝယ်ယူခွန် တိုးမြှင့်ပေးဆောင်ရသည့် စနစ်ကိုပြောင်း လဲလိုက်ရာ အခွန်ရှောင်တိမ်းလိုသူများက အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းချမှု ပိုမိုတွင်ကျယ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မူလက အိမ်ခြံမြေ အခွန်ကောက်ခံရာတွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သော ငွေကြေးတန်ဖိုးပမာဏ အပေါ် ၀ယ်ယူသူ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရောင်းချသူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရသော စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ရာမှာ ၀ယ်ယူသူ အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အခွန်ကောက်ခံသော စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုစနစ်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မတိုင်မီက ကျင့်သုံးခဲ့သော အခွန်စနစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
“အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းဝယ်တဲ့ သူက ၀င်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်လို့ရှိရင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်ရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်လည်း ဆောင်ရမယ်။ တံဆိပ်ခေါင်း အခွန်က ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးဆိုရင် ၇ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရမယ်။ အခြား ပြည်နယ် တိုင်းတွေဆိုရင်တော့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်က ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲဆောင်ရမယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ နေပြည်တော်မှာ အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ရင် ၀ယ်တဲ့သူက စုစုပေါင်းအခွန် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြားပြည်နယ်တိုင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ရင် စုစုပေါင်း အခွန် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရမယ်။ အဲဒီစနစ်က ၂၀၀၇ ခုနှစ်မတိုင်မီက ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အိမ်ခြံမြေအခွန်စနစ်ပါ” ဟု နေပြည်တော် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးက ဧရာဝတီကို ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုေ က်ာမရှင်ဥက္ကဋ္ဌ စက်မှုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းက ပြည်တွင်းတွင်မြင့်တက်လျက်ရှိသော အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများကို အခွန်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လျှော့ချမည်ဟု ဇွန်လအတွင်းပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုပြီးနောက် အိမ်ခြံမြေ အခွန်များ တိုးမြှင့်ကောက်ခံသည့်စနစ် ကျင့်သုံးလာခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခု ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသော အခွန်စနစ်ကြောင့် အိမ်ခြံမြေအရောင်း အ၀ယ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အခွန်ရှောင်တိမ်းမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာပြီး အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းချမှု ပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုအသင်းမှ သိရှိရသည်။
“အရင်စနစ်မှာတုန်းက ၀ယ်သူက ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရောင်းသူက ၁၀ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ဆောင်ရတာကိုတောင် အခွန်သိပ်ဆောင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အခွန်ဆောင်တယ် ဆိုတာကလည်း ၀ယ်ထားတဲ့အိမ်ခြံမြေကို ကိုယ့်နာမည်ပေါက်ပြောင်းမှ သက်ဆိုင်ရာရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ရတာဆိုတော့ ဘယ်သူကမှ ၀ယ်ထားတဲ့အိမ်ခြံမြေ ကို အမည်ပေါက်မပြောင်းဘူး။ Special Power (အထူးကိုယ်စားလှယ်) လွှဲစာနဲ့ပဲ အိမ်ခြံမြေတွေ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းဝယ်နေကြတာပဲ။ အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနဲ့ရောင်းရင် အခွန်ဆောင်စရာ မလိုဘူး။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ကိုယ့်အမည်ပေါက်တော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်အခြေစိုက်ဝါရင့်အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံလိုက်သော အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားမည် မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ရောင်းသမားများကလည်း သုံးသပ်သည်။
“အိမ်ခြံမြေက မော်တော်ကား တင်သွင်းသလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူက မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေ။ အခုအခွန်တိုးကောက်လိုက်ပေမယ့် အခွန်ရှောင်ပြီးရောင်းလို့ ၀ယ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိနေတာပဲဆိုတော့ သိပ်ပြီး ဈေးကျမှာမဟုတ်ဘူး။ အရောင်းအ၀ယ် နည်းနည်းအေးသွားတာတို့ ဘာတို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုံးဝ ကြီးဈေးထိုးကျတာမျိုးကတော့ ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် မြို့ပြလူဦးရေကလည်း ပုံမှန်တိုးနေတာဖြစ်လို့ ဈေးနှုန်းက ကျမှာမဟုတ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် အောင်သုခ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် တိုက်တခန်း၏ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ သိန်း နှစ်ရာဝန်းကျင်ရှိပြီး မြေကွက်များ၏ တန်ဖိုးမှာ အနည်းဆုံး သိန်းရာချီမှ သိန်းထောင်သောင်းချီထိရှိပြီး အမြင့်ဆုံး ကျပ်ငွေ သန်းတသောင်းကျော်အထိ ဈေးခေါ်နေသော မြေကွက်များပင်ရှိကြောင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်များထံမှ သိရှိရသည်။
ငွေလုံးငွေရင်း လက်ဝယ်ကိုင်ထားသူ အများစုသည် အကျိုးအမြတ်များသော အိမ်ခြံမြေနှင့် တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွင်သာ စုပြုံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေခြင်း ၊ အခြား ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် မိမိပိုင်ဓနငွေကြေးကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုထည့် ဝင်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ အလွန် အားနည်းခြင်းတို့အပြင် နိုင်ငံသားအမည်ခံပြီး တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသော နိုင်ငံခြားသား အများစုရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုသည် တန်ဖိုးကြီးအိမ်ခြံမြေများ ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံကြကြောင်း သိရှိရသည်။
“နိုင်ငံသား အမည်ခံရင်းနှီးမြုပ်နှံတာက တော်တော်ကိုများတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဈေးတွေက ထိုးတက်နေတာ။ ဘယ်လောက်ဈေးခေါ်ခေါ် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဝယ်တာပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အများစုက အိမ်ခြံမြေတွေဝယ်ထားကြတယ်” ဟု မန္တလေးအခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ရှင်းပြသည်။
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းများ အလွန်အမင်းမြင့်တက်ခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်လာနိုင်သော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြပ်နှံမှုများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်များက ဝေဖန်သုံးသပ်သည်။
ကျပ် တသောင်းတန် သတင်းကြောင့် ဒေါ်လာဈေးကွက် လှုပ်ခတ်
စီးပွားရေး တွန်းအားအတွက် ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်းမှု မရှိ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိဟု အမေရိကန် ပြော
သမ္မတကိုယ်တိုင် မတရား မဲဆွယ်ဟု NLD ပြော
18 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ငှက်ခါး August 15, 2012 - 9:55 am	ကား နဲ့ အိမ်ခြံမြေ က လုံးဝ သဘောတရား မတူ အခွန်မြင့်လေဈေးမြင့်လေ
Reply	kopauk2012 August 15, 2012 - 11:16 am	I like irrawaddy…..မြန်မာပြည် က ခ၇ို နီတွေ အကြောင်းေ၇းတာ တွေ ဖတ်ချင် ပါတယ် အယ်ဒီတာကြီးများ ခင် ဗျား
Reply	Property Guru August 15, 2012 - 3:08 pm	The price can really drop as if Government take strong action by using policy. Actually, this increasing of Tax is just the first step only. As you can see experience from Car Import, Government can modify policy for this Property matter alsoabit byabit.
Reply	Property Guru August 15, 2012 - 3:23 pm	Actually, its good foralot of people as if property price drop as income of most of the people in Myanmar are in really very low condition. They don’t have their own house/shelter and even they have to pay higher rental cost as if property price is high. So, most of their income have to use for shelter, food and transportation and as consequences, they don’t have proper plan for education of their children, health care and for their old age life. So, personally, I agree and encourage to Government to take strong action upon this policy matter on property in order to control the property price by consideration of middle income level and lower income level citizens.
Reply	Sှan August 15, 2012 - 4:20 pm	Soe Thein/ Win Myint —> BRAIN
Reply	goodshine August 15, 2012 - 10:49 pm	အစိုးရအနေနဲ့အိမ်ခြံမြေဈေးကျအောင်ချမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိနေတာပဲ၊ အချိန်တန်ရင်လုပ်မှာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် မြို့ဟောင်းကိုထားခဲ့ပြီး မြို့သစ်ကိုပီပြင်အောင် တည်ဆောက်ရင် အဲဒီမြို့ဟောင်းမှာဘယ်သူမှဈေးကြီးပေျးဝယ်မနေပါဘူး၊စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအုံး၊မြို့ဟောင်းမှာ မော်တော်ကားတွေကကျပ် ၊လမ်းပေါ်မှာဈေးသည်၊ဈေးဝယ်နဲ့တကယ်တော့သန့်ရှင်းသာယာမှု မရှိတာအမှန်ပါ။လေကောင်းလေသန့်လည်းမရသလို၊ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းမညီညွတ်ပါဘူ။၊ ရေ၊မီး ကအစ အဆင်မပြေတော့ မြို့ဟောင်းမှာဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီးချန်ထားခဲ့ရမှာပါ။ မန်းတလေးမြို့သစ်တောင်တည်တော့မှာပဲ၊လာမှာပါ ရန်ကုန်မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ရေ၊မီး၊မိလာ၊ဈေး၊ဘဏ်၊လုံခြုံရေး အစရှိသဖြင့်ပီပြင်အောင်သာလုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါ၊ အားလုံး ပြောင်းရွှေ့စည်ကားလာမှာပါ။
Reply	ကောင်းအောင် August 16, 2012 - 7:54 am	လက်ရှိ ရှိသူတွေက အခွန်ငွေတိုးဆောင်ရတော့ ပြန်ရောင်းတော့လည်း ဈေးပို မှပြန်ရောင်းတော့ မှာပေါ့ အခွန်က နှစ်ဆင့် ခံရတာ။ စဉ်းစားသာကြည့် ဈေးကျမလား တက်မလားဆိုတာ ကလေးတောင်သိတယ်။
Reply	ကောင်းအောင် August 16, 2012 - 7:56 am	မြို့ဟောင်းကိုဖျက်မြို့သစ်တည်ဖို့ဆိုတာ ကလေးကလားအလုပ်မဟုတ်ဘူး အိမ်တစ်လုံးတစ်လုံး ရွှေ့ပြောင်းတာတောင်လွယ်တာမှအဟုတ်တာ။ ကို့လူ
Reply	ကောင်းအောင် August 16, 2012 - 8:09 am	အခွန်လျှေ့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှပိုင်ဆိုင်မူအရှုပ်အရှင်းကင်းမယ်။လူတိုင်းအခွန်ဆောင်နိုင်မယ်။
Reply	ko ko sai August 16, 2012 - 8:48 am	lwe lwe nei ma phyit naing bu htin the naw econimic ah yang kong ma phyit mar per
Reply	thiri August 16, 2012 - 10:42 am	အဓိက အိမ်ခြံမြေ ဈေးကြီးပေးဝယ်နိုင်တာက ငွေမဲငွေဖြူလုပ်သူများ၊ တရုတ်လူမျိူးများ၊ ကုလားများသာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေမ၀ယ်နိုင်ကြပါဘူး။ ကျမအနေနဲ. အကြံပေးချင်တာကတော. မှတ်ပုံတင်များကိုသေချာစိစစ်ပြီး နိုင်ငံသားပိုင်ဟုတ်မဟုတ်၊ (တရုတ်များအများစုမှတ်ပုံတင်ရှိပါတယ်) မြန်မာပြည်တွင် အနည်းဆုံး နှစ်၃၀ နေထိုင်ခဲ.ပြီး လွန်ခဲ.သောနှစ်၃၀ကတည်းက မှတ်ပုံတင်ရှိသူများသာပိုင်ဆိုင်ရမည်တို.၊ မြို.တမြို.မှာရှိတဲ. အိမ်၁လုံးရဲ.တန်ကြေးကို ရာဖြတ်များအားသေချာစွာဖြတ်ခိုင်းပြီး အခွန်လိမ်ဆောင်လို.မရအောင်လုပ်တာတို.၊ လူ၁ဦးကို အိမ်၊မြေ၂ (သို.)၃ လုံးထက်ပိုင်ခွင်.မရှိတို.၊ လုပ်ငန်းတကယ်မလုပ်တဲ.မြေများကို အခွန်၂(သို.)၃ဆ ဆောင်ခိုင်းတာတို.၊ တိုက်ခန်းများကို သူများနိုင်ငံတွေလို အများကြီးဆောက်ပြီး အရစ်ကျစနစ်နဲ.ရောင်းတာတို.၊ တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသော ၀န်ထမ်းငယ်များကိုသာ နေထိုင်ရန် မြေကွက်ပေးတာမျိုးတို.၊ ………..လုပ်ရင်မြေဈေးမကျဘဲနေမလား။
ဒါတောင်… အခွန်ဝန်ထမ်းတွေ၊ ရာဖြတ်တွေ၊ မြေစာရင်းဝန်ထမ်းတွေ၊ လာဘ်စားလို.မရအောင် သေချာစိစစ်ရမှာပါ။
Reply	yiyi September 4, 2012 - 7:42 pm	you must be poor…. becoz rich people never think like this.
Reply	Ray Burathoki September 22, 2012 - 10:07 am	your thinking is like former government militery rule . but now getting democracy do you know about that? i am really sorry about your narrow think,time is gone baby.every one can own plot there is without limit.
Reply	win August 17, 2012 - 11:57 pm	အခွန်ဝန်ကြီးကလူတွေထီပေါက်ပြီ
Reply	myint August 19, 2012 - 6:48 pm	ကျွန်တော်တို့စီမှာ အိမ်ခြံမြေထက်အရေးကြီးတာပေါ်ပေါက်နေပါတယ် အဲဒါက လှည်းကူးက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းလို့ မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ခန်းတွေကို ပါရောပြီးဖျက် သိမ်း ခိုင်းနေကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီဆိုင်ခန်းကနေမှီခိုပြီးတော့ ရပ်တည်နေရတာပါ၊ အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် မိသားစုအများကြီး ပြသနာတွေရှိလာမှာပါ။အဓိက ကျောင်းသားတွေပါ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် ခဲ့ရင် နိုင်ငံတော်မှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေပိုများလာမယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပါ နှောက်နှေးလာပါလိမ့်မယ်
အခုလို တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ မြေယာသိမ်းတာနဲ့၊ ဆောက်လုပ်ပြီးသား ဆိုင်ခန်းတွေကို ဖျက်သိမ်းခိုင်းတာတို့ဆိုတာ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်အခုရေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်။
Reply	min min August 21, 2012 - 10:39 pm	ျြေမဂရန်သက်တမ်းကို၃နှစ်တကြိမ်ပေးလိုက်ပါမြေဆိုတာ
Reply	agag September 2, 2012 - 11:26 pm	အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ
Reply	piustunwai September 19, 2012 - 1:30 pm	In reality, the greedy mind is the most important to abolish,you know,and the main thing is to share accordingly to everyman and woman of all citizens.But easy said than done.
NLD အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဗဟိုဘဏ်လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရနိုင်ပါ့မလား
မဲခေါင် အရှေ့-အနောက် စင်္ကြံလမ်းပိုင်း အတွက် မြန်မာ ချေးငွေ ရရှိ
အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေဆဲ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု
ရန်ကုန် ဘတ်စ်ကား အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာများ စတင်ရောင်းချ